ဂန်းနန်းစတိုင်? တကယ်ပဲ ... Dude ရပ်တန့်! (ထုတ်လုပ်) - Djs များအတွက် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, Vjs, နိုက်ကလပ် 2019
SKU: #70 - DJ သမား 52 ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည် အမျိုးအစား: DJ သမား drop
ဂန်းနန်းစတိုင်? တကယ်ပဲ ... Dude ရပ်တန့်! (ထုတ်လုပ်)
ဒါဟာပိုမိုမြင့်မားလေယာဉ်မှရောနှောဖို့ခြီးမွှောဖို့အချိန်ပဲ! '' ကဆင်း up ပြုလုပ်ဖော်စပ်နှင့် throwin! (ထုတ်လုပ်)
standby ကျေးဇူးပြု. , ထို DJ သမားနည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲများရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ , ဘားမှာသောက်ရသူတစ်ဦးဦးရဲ့နံပါတ်ရလာပေမယ့်အနားမှာရပ်နေ ကျေးဇူးပြု. ပေးပါ။ (ထုတ်လုပ်)
သငျသညျသေး၎င်းတို့၏အရေအတွက်ကိုဆည်းပူးကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင် ... ဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း? ဒါဟာဖြစ်ပျက်မ! (ထုတ်လုပ်)
Ladies နှင့်လူကြီးလူကောင်း။ ဘားမှာသင့် tabs များပေးဆောင်ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်! သူတို့ဟာနေဆဲသင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ရှိသည်။ (ထုတ်လုပ်)